Sawirro:Obama iyo Netenyahu oo Ubaroortay Geerida Boqor Cabdala Bin C/Caziiz.
Sawirro:Sida looga ciiday degmada Ceelbuur
Friday January 23, 2015 - 21:48:26 in Wararka by Super Admin
Cabdalla Bin Cabdul Caziiz Hoggaamiyihii hore ee Xukuumadda Aala Sacuud ayaa ahaa tiir adag oo qeyb ka ah xamlada loogu magac daray ladagaalanka Argagaxisa Ladagaalanka Muslimiinta.
isagoo 90 sana jir ah ayuu boqor Cabdalla si fool xun ugu geeriyooday isbitaal kuyaal magaalada Riyaad ee caasimadda ah,wuxuu ahaa 90 sana jir intabadan cimrigiisa kusoo qaatay la dagaalanka muslimiinta iyo ilaalinta ammaanka Yahuudda iyo Nasaarada.
Saacado kadib markii uu dhintay Cabdalla Bin Cabdul Caziiz ayay hogaamiyaasha Yahuudda iyo Mareykanka waxay ku dhawaaqeen in ay waayeen saaxib weyn!.
Brack Obama oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in Reer galbeedka iyo mandiqadda Bariga dhexe loo bixiyay ay waayeen saaxiib weyn oo dhanka Argagaxisa ladirirka ah.
"Waxaan weynay saaxiib dhan walba nagu garab taagnaa khaasatan ladagaalanka xagjiryaasha islaamiga ah,Cabdalla wuxuu ahaa saaxiib Mareykanka iyo beesha caalamka kaalin muhiim ah u hayay”ayuu yiri Obama.
R/Wasaaraha Yahuudda Benyamiin Netenyaahu oo isna tacliiq ka bixiyay geerida boqorkii Sacuudiga ayaa yiri "wuxuu ahaa saaxiib muhiim ah oo nabadda Yahuudda ka qeyb qaatay wuxuu ahaa Nin dhax dhaxaad ah oo aanan hilmaami doonin”.
Waxyaabaha lagu xusuusan doono Hoggaamiyihii Aala Sacuud waxaa kamid ahaa ka qeyb galka shir looga halyay "iskusoo dhaweynta diimaha adduunka” oo ka dhacay magaalada Madriid ee dalka Spain.
Khudbad uu boqor Cabdalla shirkaasi ka jeediyay ayaa ka yaabisay caalamka islaamka kadib markii uu ku cayaaray aayadaha qur’aanka kariimka gaar ahaan dabayaaqada suuradda Al-xujuraad wuxuuna shirkaasi ka sheegay in "Yahuudda, iyo Nasaarada” ay yihiin diin wanaagsan oo in lagalo ay banaantahay!!.
Waxyaabaha kale ee lagu xusuusto Cabda Bin Caziiz waxaa kamid ah martiqaad uu u sameeyay madaxweynihii ee Mareykanka G.W Bush isagoo billad sharaf guddoomiyay saliibiyiin.
Boqorka Sacuudiga oo markii ugu horraysay soo muuqday kadib raafkii lagu sameeyay qaar kamid ah Amiirrada wadanka.
Boqorka Sacuudiga oo Amiirka Qadar ku marti qaaday shir ka dhici doono magaalada Riyaadh.
Madaxii ilaalada Boqorka Sacuudiga oo toogasho lagu dilay.
Boqorka Sacuudiga Oo wiilkiisa u magacaabay Wasiirka Tamarta.
Dowladda Tuunis Oo Ku dhawaaqday Geerida Qaayed Beeji Sabsi Madaxweynihii Wadanka.
Boqorka Aala Sacuud oo isku shaandheyn Ballaaran ku sameeyay Golihiisa Wasiirrada.
Taliban Oo Iclaamisay Geerida Sheekh Jalaaludiin Xaqaani.